Isikhokelo esiDibeneyo sokuLungelelanisa ukwakha kunye noKwakha iiMveliso
Uchithe iiyure ezininzi ukwenza iwebhusayithi okholelwa ukuba ilungele ukubonisa umhlaba. Uwafumene amagama aphambili afanelekileyo, ucoce iintloko zakho kunye nesicatshulwa, kwaye wenze amaphepha awahlukeneyo aluncedo kunye neefowuni ezinkulu ezenza isenzo (ii-CMA). Ngaphandle kwayo yonke le nzame, akukho mntu uzayo ukuza kundwendwela iphepha lakho.
Ingumba wengxaki ukuba uninzi lwabanini bamashishini luye lwajongana nalo. Ihlala ihla kwizinto ezimbini: igunya kwisifundo kunye nokwakha i-backlink. Ngaphandle kwesakhiwo esisebenzayo sokwakha uphawu okanye ubuchule bokwakha, awuyi kufumana mpumelelo ingako.
Ndizakha njani iikhonkco?
Ngeepesenti ezingama-75 ze-SEO ezenzekayo kwiphepha , ayimangalisi into yokuba abantu abachitha ixesha elininzi begxile ngaphakathi baphelela kungabikho nto. Ngale nto engqondweni, kubalulekile ukuba uqaphele ukwakhiwa kwekhonkco. Le nkqubo ibandakanya "ukwakha" ubungakanani kunye nomgangatho wamakhonkco angaphakathi angena kwiwebhusayithi yakho. Kukho iindlela ezahlukeneyo onokukwenza ngazo oku, kwaye siza kuhamba ngezantsi ezimbalwa.
Ukwakha ikhonkco lokwakha liza ngeendlela ezimbini ezibalulekileyo: ukuveliswa komxholo wokubuka iindwendwe nokwazisa umxholo wakho kwabanye. Ngokungafaniyo nokwabelana ngomxholo wakho kwimidiya yoluntu, oku kubandakanya ukuphuma uye kwezinye iisayithi kwi-niche yakho.
Ukuveliswa komxholo weNdwendwe
Xa ubona ibhlog yazisa omnye umbhali onxibelelanisa nomxholo wayo, oku kuyimveliso yokundwendwe. Inketho yokuqala kukuthengisa indawo yebhlog ukuze ubhale ngokwabo ngelixa beposa eyakho. Izithuthi ezihamba kuyo nayiphi na iwebhusayithi ziya kuhamba phakathi kwale mithombo mibini.
Ukhetho lwesibini lubandakanya ukunikezela ngokubhala iposti yeblogi yomnye umntu phantsi kokulindela ukuba ungafaka ikhonkco kwibhlog yakho. Unikezela ngenkonzo komnye umntu otshintshiselana ngezindlu nomhlaba kwiwebhusayithi yabo. Umxholo sisixhobo esixabisekileyo, kwaye abafundi bayazithanda iimbono ezahlukeneyo.
Ukwazisa imixholo yakho
Xa usiya kwiiwebhusayithi ezinje ngeReddit, iFacebook kunye ne-Twitter, unethuba lokubonelela ngengqondo yakho eyahlukileyo. Umzekelo, abantu banokuthumela imibuzo malunga neziseko ze-SEO, kwaye ungathatha ithuba lokubhalwa kwenqaku lakho elibhaliweyo malunga nomxholo. Nangona kunjalo, oku kuza nokuqwalaselwa okubalulekileyo.
Esi senzo yinto enokuthathwa ngabantu abathile njenge "plugi engenazintloni." Kukuba kufana nokufumana umnxeba ovela kumhlobo wakudala, kuphela ukuba uzame ukuba akuthengele itshokholethi. Eyona ndlela onokuthi uyiphephe ngayo le nto kukuqinisekisa ukuba umxholo ulungile kwaye uluncedo. Qiniseka ukuba uhlala uzithembile xa usenza ingcebiso. Abantu mancinci amathuba okuba bakugwebe ukuba uyakholelwa kule nto uyithethayo.
Ukunxibelelanisa abaNtu ekuhlaleni
Ukubuyela umva koluntu kuyafana nokwazisa umxholo wakho. Umahluko kukuba uyayiveza ebantwini esele iku-niche yakho. Ngokuhamba kwiwebhusayithi ezinjengeQuora, iReddit, okanye nayiphi na iforum yexesha elincinci, unobutyebi babantu osele ubonakalisile ukuba unomdla kwisihloko sakho.
Kakhulu nge "nokwazisa umxholo wakho" icandelo, uza kufuna ukuqiniseka ukuba uzahlulahlise kwaye wenze umxholo wakho ube luncedo. Kwakhona, uya kufuna ukufunda izikhokelo zeqonga lomntu ngamnye ngaphambi kokwenza iposi. Uninzi olunezikhokelo ezichasene nogaxekile. Phantse zonke izixhumanisi ezingaphandle kweeforamu zithathwa njengogaxekile.
Ukufumana kwakhona iiLinks ezilahlekileyo kunye neziBekekileyo
Ukuba sele usungule inkqubo yokwenza ii-backlinks, ukuzihlaziya ngalo lonke ixesha utshintsha indawo yakho kunokuba yingxaki. Le mfuno yokulungiswa ikwangumba-ngxaki kwabavelisi bemeko eqhubekayo efuna ukulawula ikhathalogu yabo.
Ukuqala ngekhonkco ezaphukileyo, ukuba ufunda i-blogger eposti kwi-niche yakho, okanye kufutshane ne-niche yakho, unethuba lokufikelela kule blogger ukuzalisa ikhonkco elingelolakho. Ngokutsala ingqalelo koku kwaye uzinikezele njengesisombululo, wenze imisebenzi yabo emibini.
Ukutshintshwa kweegiya kwikhonkco elahlekileyo , ezi zinokuqwalaselwa xa ufumanisa ukuba umntu othile ukhuphe ikhonkco kumxholo wakho kwiphepha labo. Umzekelo, ukuba utshintsha ikhonkco kwiiblogi zakho ukuphucula i-SEO yakho, amaqabane akho anokutshintsha endaweni yelo khonkco kunye nomnye umxholo. Qiniseka ukuba uhlala unxibelelana nabanye abavelisi bomxholo ukuba uyayitshintsha indawo yakho.
Semalt i- Website Analytics hlobo luza kukunika ngumbono omhle indlela yokusebenzisa ezi zicwangciso. Ngokubonelela nge-backlinks ekumgangatho ophezulu ngokusebenzisa umkhankaso wabo we-SEO ohlawulelweyo, bakwenzela lo msebenzi mkhulu. Nangona kunjalo, ukuqonda iinkcukacha ngasemva kwesakhiwo sokunxibelelana kuya kukunika umbono olungileyo wokuba uqale phi. Unaloo nto engqondweni, siya kuyifaka kwezinye isiqingatha sokugxila kwethu namhlanje: Ukwakha i-Brand.
Ndizakha njani iiBrands ngo-2020?
Unyaka ka-2020 ube ngunyaka ophambeneyo, apho sisoloko sizibuza malunga nesidingo se-SEO ngexesha lemicimbi yangoku. Asifuni kuphendula lo mbuzo kweli nqaku. Endaweni yoko, sizakuthatha eli thuba ukukhumbuza wena kunye neentsapho zakho ukuba nihlale nikhuselekile kula maxesha anzima.
Ukwakha ibranti kwinyaka yangoku kuyinxalenye yokwakha ikhonkco. Njengoko zonke zikhokelela kugxininiso oluphambili lwesakhiwo sekhonkco: i-SEO. UkuKhangela kwiNjini yokukhangela kubandakanya ukwakha iwebhusayithi yakho ngendlela yokuba inokukhangela ngokulula. Ukwakha ibranti kunye nokwakha ikhonkco zombini ezi zinto zinxulumene noku.
Ukungqinelani kubaluleke kakhulu nangawuphi na umsebenzi. Siza kudlulela ekwakheni ilizwi leempawu kunye nobuntu, ukuseka uphawu lwakho njengogunyaziwe, nokwakha ibali lakho lophawu. Ngokwenza oku, abantu baya kuba lula ukuthatha uphawu lwakho njengenkampani esekwe ngokuqinileyo.
Ukwakha ubuntu beShishini lakho kunye nelizwi
Ukuba ufuna umzekelo ogqwesileyo wobuntu bohlobo, jonga kumanzi iLiquid Dead Mountain Water. Isitayile esikhulayo, esineMacabre senkampani yaseMelika sisebenza ukutsala abanye abantu. Bayabazi ubuntu babo bohlobo; abo babhala imixholo yabo yewebhu bayavuma.
Akunyanzelekanga ukuba ube nelizwi le-brand egqithisileyo. Amaxesha amaninzi, ezona brand zigqwesileyo kwesinye isiphelo sebala. Jonga iMarriot, iGoogle, iMicrosoft, iUSA, kunye neCisco ngemizekelo yeempawu zophawu lomda osuka kwinto eqhelekileyo ukuya kwingcali. Zonke ezi zinto zithathe ubuntu kunye nelizwi.
Umbuzo ophambili ekuphuhliseni nayiphi na into yophawu lwakho kukubuza imibuzo emininzi. Uphendula imibuzo malunga nokuba kutheni, Ngubani, kwaye uthini ngophawu ngokwakha iwebhusayithi yakho. Umsebenzi uphuma ngqo kwingxelo yemishini.
Ukuphuhliswa kwengxelo yemishini kudibanisa injongo yakho kwifomathi evunyelweyo enelizwi kunye nobuntu bakho. Sisizathu sokuba uvuke uye emsebenzini. Umzekelo, ingxelo ye-semalt yemishini ingezantsi.
Umthengi usembindini weshishini likaSemalt. Ngelixa amagama asezantsi eqhelekileyo, amaxabiso abo aphambili ayakhula ngokuzibophelela kwabo. Kwishishini lakho, kufuneka uchaze uthumo kunye nendlela eya kubonakala ngayo.
Ukwakha ibali lakho leBrand
Ibali lomlinganiso luhambo lwakho olunemvakalelo. Yindlela ufike ngayo kwi-mission yakho njengoko imi namhlanje kwaye uyakha njani impumelelo kubaxumi bakho. Idatha inokuqinisa amabali e-brand, kodwa la mabali asekwe ngokweemvakalelo.
Ngenxa yoko, kunzima ukukhumbula ukuba kuya kufuneka ukuba wakhe ibali lomhlobo wakho njengenqaku eliqhelekileyo . Onke amabali amnandi anamagorha, ii-villains, iingxabano, kunye nezigqibo. Ungayifakela nayiphi na indlela oyifunayo. Iqhawe inokuba nguwe okanye umthengi, umntu oza kuba lilungu yile nto ebanqandayo ukuba bangakwazi ukufikelela kwinjongo zabo, kwaye ungquzulwano yinkqubo yoko kuthathe ukukufumana apho ukhoyo namhlanje.
Isisombululo, esiyinto ebalulekileyo, bubungqina bokuba ufike phi namhlanje. Ukuba uxelele umxumi ukuba ubungqina besisombululo sakho buvela kumthengi ali-1 000 ngonyaka ukusuka kumthengi omnye ngonyaka, loo nto yinto yokuxhuma. Thatha apha ngezantsi engqondweni xa usakha ibali lakho.
Isibongozo ngokweemvakalelo ngohambo lwakho koko kuya kubahlanganisa ukuba babe ngumntu.
"Iqhawe" lembali yakho inokuba ngumthengi ngelixa usenokuba sisisombululo.
Qiniseka ukuba uxhasa naliphi na ingxelo yakho ngezibakala. Oku kunokuba bubungqina, kodwa amanani anefuthe elinamandla ebantwini.
Sebenzisa eli phepha ithuba lokubeka amagama abalulekileyo. Ezi ziya kuba zezendalo kodwa zikuncede ekumiseleni ukhangelo.
Ukuseka i-Brand yakho njengeGunya
Kukho indlela yesiqhelo apho i-brand inokubonakalisa igunya labo. Uninzi lwezi ndlela sele zizinto esele sizikhankanyile. Unokuqokelela ubungqina, ubanike izibalo eziqinisekisiweyo zomsebenzi wakho, ubalise ibali lakho. Ukwakha uphawu lwakho njengagunya nako kunegalelo kwimizamo yakho yokubuyela umva.
Ukunikeza ngesiqulatho simahla esibonelela ngexabiso yindlela yendalo yokwenza oku. Ukuba ibhlog ye-brand yakho inegalelo ekusombululeni ingxaki enxulumene ne-niche yakho, ezinye iibhloko ziya kuba nakho ukwabelana ngayo. Ngokukhuthala kwiindawo ezinabantu bakho, unamathuba amaninzi okunxibelelana nabo baneengxaki ozama ukuzisombulula.
Lo msebenzi unika ithuba elaneleyo lokumisela igunya. Xa i-injini yokukhangela kaGoogle isenza umsebenzi wayo, ifuna umthombo onegunya. Okukhona uzisa kwindawo yakho njengesixazululo seengxaki, abantu abaninzi baya kufumana ukutyelela iwebhusayithi yakho.
Ukwakha ikhonkco kunye nokwakha ibranti kukunceda njani ufikelele kuPhezulu bakaGoogle
Ezi ntsuku, ikhonkco kunye nokwakha i-brand zikulwalamano lweempawu. Ngokuseka uphawu lwakho njengogunya olusebenzayo kwi-niche yeshishini lakho, uphawu lwakho luya kukhula ngokwemvelo. Ukuba udibanisa lo msebenzi kunye nokwenza i-mission, ibali kunye nelizwi elingaguqukiyo, uya kubona iziphumo.
Ngokwakha ikhonkco, ukwazi ngokubaluleka kokulungisa amakhonkco aphukileyo kunye nelahlekileyo. Kwakhona, ukuvelisa imixholo yasimahla kwibhlog yakho kunye neebhlog zeendwendwe kukunika elinye ithuba. Iimveliso ze-SEO zikaSemalt zijongana neengxaki ezininzi ngqo. Ngophononongo oluneenkcukacha ngakumbi lokuphuculwa kwendawo yakho, yenza iakhawunti namhlanje.